Akon'ny RuNet · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tantara tamin'ny Akon'ny RuNet tamin'ny Aogositra, 2011
Rosia: Maneho Hevitra Momba Ny Fihetsiketsehana Tany Tripoli
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Aogositra 2011
Raha ampitahaina tamin'ny volana Aprily 2011, rehefa nandinika voalohany ny fihetsika Rosiana tamin'ilay disadisa ny Global Voices, hita mizara kokoa ny hevitra ankehitriny; nizara ho vondrona roa miavaka, mpanohana sy mpanohitra an'i Kolonely Kaddhafi, ireo mpitoraka blaogy. Manadihady i Alexey Sidorenko.
Rosia: Ireo Bilaogera Nahatsiaro ny Fitsingerenan'ny faha 20 taonan'ny Fanonganam-panjakana ny Volana Aogositra
Eoropa Afovoany & Atsinanana 27 Aogositra 2011
Ny 19 Aogositra 2011, Ny Rosiana dia nankalaza ny faha 20 taona nanomboka tamin'ilay "August Putsch," ( Fanonganam-panjakana ny Volana Aogositra) "coup d'etat" tsy nahomby, notarihin'ny manampahefana vitsivitsy avy tao amin'ny KGB sy andianà miaramila izay nanohitra ny fandaharan'asam-panovan'i Gorbachev sy ny fanapariahana ny fahefana any amin'ireo Repoblika Sovietika. Notarihana ho eny an-dalambe ny mponina mba hiaro ny demokrasia , ary mahatsiaro ny ezaka nataony ireo bilaogera .
Eoropa Afovoany & Atsinanana 13 Aogositra 2011